၂၀၁၈ ဇွန်လိုင်လကစတင်ပြီး HTTP တွေကို “Not Secure” လို့ဖော်ပြပေးတော့မယ့် Chrome! – AsiaApps
၂၀၁၈ ဇွန်လိုင်လကစတင်ပြီး HTTP တွေကို “Not Secure” လို့ဖော်ပြပေးတော့မယ့် Chrome!
February 9, 2018 February 9, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on ၂၀၁၈ ဇွန်လိုင်လကစတင်ပြီး HTTP တွေကို “Not Secure” လို့ဖော်ပြပေးတော့မယ့် Chrome!
Web browser တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chrome ဟာတော့ ၂၀၁၈ ဇွန်လိုင်လကစတင်ပြီး လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ website တွေဖြစ်တဲ့ HTTP page တွေကို “Not Secure” လို့ဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chrome အနေနဲ့အခုလိုပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ Web browser ကိုပိုမိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Chrome ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်မှာ Chrome ဟာသူ့ရဲ့ Web broswer ကလုံခြုံမှုရှိတဲ့ Website တွေရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာ HTTPS ထည့်ပေးခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါ။ ပြောင်းလဲမှုကို ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး အသုံးပြုသူတွေကို HTTP ဟာ လုံခြုံတဲ့ Webiste မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ website က developer တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ website ပိုမိုလုံခြုံပြီး ကြည့်ရှု့သူပိုမိုများပြားအောင် HTTPS အဖြစ်ရောက်ရှိအောင် ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုဟာ Chrome ကို ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Web browser တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်စေခဲ့ပြီး HTTPS ကိုပြောင်းရွေ့ခဲ့တဲ့ Webiste တွေဟာ Android နဲ့ Window မှာဆိုရင် ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော်၊ OS နဲ့ Mac မှာ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိရှိခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် အမြင့်ဆုံး Website ၁၀၀ မှာ ၈၁ ခုက HTTPS ကို default ထားပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Chrome ဟာ HTTPS ကိုဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် HTTP ကိုတော့ဘာမှမဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။
အခု ၂၀၁၈ ဇွန်လိုင်လကစပြီး Chrome ရဲ့ 68 version တွေမှာ မလုံခြုံတဲ့ website တွေဖြစ်တဲ့ HTTP ကို “Not Secure” ဆိုပြီးဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲသွားမှာကတော့ အောက်ပါပုံအတိုင်းပါပဲ။
အခုလိုပြောင်းလဲမှုကြောင့် အသုံးပြုတွေအနေနဲ့ ဘယ် website ကလုံခြုံမှုရှိတယ်၊ ဘယ် website ကတော့လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိရှိနိုင်တော့မှာပါ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ Asiaapps ကြီးကလုံခြုံတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပါ (မယုံပါကဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်)။
Android, Google, iOS, Web browsers
ခန့်ညားတဲ့ ပန်းချီတွေကို ဖန်တီးရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် Tayasui Sketches
Oreo update ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Vivo Smartphone အချို့